जनताको बहुदलीय जनवाद सत्तामा जाने भर्‍याङ मात्र बन्यो - Left Review Online
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा एउटा नयाँ वर्ग सिर्जना भएको बुझाउँछ। यो यस्तो वर्ग हो जो दलाल पुँजीवादको जुत्ता र समाजवादको टोपी लगाउँछ। समाजवादको टोपी लगाएर हुने फाइदा लिन्छ। तर दलाल पुँजीवादले जता लैजान्छ त्यतैको बाटो हिँड्छ ।
एउटा क्याम्पसमा स्ववियू सभापति भइसकेका मेरा एक साथी अहिले व्यापारमा छन् । केही दिनअघि उनले मलाई सोधे- भुसालजी, जुन वर्गका लागि हामी राजनीतिमा लागेका थियौं। पार्टीमा त त्यो वर्ग नै छैन। कहाँ गयो त्यो वर्ग?
जुन वर्गका लागि संघर्ष गरेको त्यो वर्ग नै छैन भन्नुले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा एउटा नयाँ वर्ग सिर्जना भएको बुझाउँछ।
यो यस्तो वर्ग हो जो दलाल पुँजीवादको जुत्ता र समाजवादको टोपी लगाउँछ। समाजवादको टोपी लगाएर हुने फाइदा लिन्छ। तर दलाल पुँजीवादले जता लैजान्छ त्यतैको बाटो हिँड्छ । हिजो तल परेकाका माथिल्लो वर्गसँग द्वन्द्व थियो। हिजो तल परेका मानिसहरू आज माथिल्लो वर्गमा आएका छन्। अनि उनीहरूको द्वन्द्व तल्लो वर्गसँग छ।
यतिबेला वाम समस्या (यसमा नेकपा भनौँ) र समाधान शीर्षकमा दिनदिनै कार्यक्रम हुनु पर्ने हो । किनभने वामआन्दोलनमा हामीले कैयौं चुनौती देख्न थालेका छौँ, जसमा बहस आवश्यकता छ।
दलाल पुँजीवादको जुत्ता !
राजाको जुत्ता कहिले कांग्रेसले लगायो। कहिले कम्युनिस्ट ले लगायो। तर हिँड्ने बाटो एउटै भयो। हामीले अहिले फेर्नु पर्ने नै यही कुरा हो। यो फेर्नु र लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको तयारी गर्नु चुनौती हो।
अहिले नेकपाका लागि ऐतिहासिक अवसर छन् ।
पहिलो, निरन्तर विस्तारित वामजनमत । किन वामजनमत विस्तारित भएको छ भन्ने अर्थ राजनीति र भूराजनीतिक पाटोमा पछि बहस गरौंला। पटक पटक विभाजित भएर पनि जनमत यसका वरिपरि छ। तथ्य के हो भने यो निरन्तर विस्तारित भैराखेको छ।
चौँथो, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको प्रक्रियाबाट साथसाथै विद्रोहबाट आएका, उथलपुलथ गराएका, नेता कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति नेकपासँग छ। दुई वटै आन्दोलन पार गरेका हजारौं मान्छेको अनुभवबीच फैलिनु अर्को अवसर हो।
पाँचौँ, अहिलेको संविधान। लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समाजवादको तयारीका लागि धेरै ठूलो अवसर संविधानले जुटाएको छ। त्यसले घोषणा नै गरेको छ- देश समृद्ध हुन्छ र समाजवाद उन्मुख हुन्छ। अझ संविधानमा राखिएका मौलिक हकमार्फत् समाजलाई, राजनीतिलाई समाजवादीकरण गर्ने अवसर संविधानले दिएको छ।
त्यहाँ जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) बारे पनि यथेष्ठ छलफल भएन । जबज कसरी आयो? विकासका आधार के थिए? ऐतिहासिकता के थियो? कुन बिन्दुमा आएपछि बहुदलीय जनवादलाई सिद्धान्त र कार्यक्रमका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्‍यो? यसको विकास अब कसरी अगाडि बढ्छ? जस्ता प्रश्नमा छलफलै भएन। ‘हाम्रै राजा ठूला छन्, हाम्रै देश विशाल’ भनेर बच्चामा नारा लगाउन लगाएजस्तो भयो।
यतिबेला राष्ट्रपति कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ। मेरो भनाइको मतलब उहाँले कम्युनिस्टको जातै फेरेको होइन होला भन्ने हो। तर कम्युनिस्ट राष्ट्रपति बन्दा कसैलाई घुँडा टेकाउन हुन्छ कि हुन्न? के गर्नुपर्छ, के गर्न हुन्न…? हाम्रा ठूला नेताको बोली हेरौं।
अहिले नेकपामा मान्छे द्विविधामा छन्- कता उभिने, कता उभिने !
(नेकपा स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
पछिल्लाे - देश विकासलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छः अध्यक्ष प्रचण्ड
अघिल्लाे - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीका ५ प्राथमिकता